China Fast Speed ​​Jelly Glue ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
I-Jelly Glue wuhlobo olusha lokulondolozwa kwemvelo hot ncibilika ingcina, ethathwe ezintweni zemvelo, isithako esiyinhloko i-gelatin yezimboni (uhlobo lwe iglu yezilwane, leyo hot ncibilikisa iglu)
Ububanzi besicelo: Ijeli yezilwane isetshenziswa ekukhiqizeni ibhokisi lezipho ezisezingeni eliphakeme, ibhokisi lewayini, ibhokisi lezimonyo, ibhokisi letiyi, ifolda, incwadi ekhava oluqinile, isichazamazwi njll.
Ijubane lokomisa kwejubane le-jelly glue liyashesha futhi lisetshenziswa kakhulu kokuhlukile kwemishini ezenzakalelayo, njenge:
I-jelly glue yomshini wokwenza icala ngokuzenzekelayo
I-jelly glue yomshini wokumboza ibhokisi othomathikhi
I-jelly glue yomshini wokwenza ikhava enzima othomathikhi
Njengoba sikwazi lokho U-LD Davis yinkampani edumile enikezela iglu yezilwane e-USA, kepha eChina, uGelken Gelatin ungomunye wochwepheshe I-china jelly glue abahlinzeki abakhiqiza i-gelatin yezilwane ezinamathele. Ngo-2006, saqala ukuzakhela esethuimboni yejeli yeglue, eyayicubungula ngqo isisombululo se-gelatin ku-jelly glue, futhi iqeda indlela yendabuko yokuncibilikisa umkhiqizo oqediwe we-gelatin powder bese iphinda yenziwa kabusha. Yehlisa izindleko ikakhulu. Ngakho-ke, thinai-jelly glue ephelele ngenani lokuncintisana.
Ijubane elisheshayo lejelly glue
I-1.Iglue isetshenziswa emshinini othomathikhi wokunamathisela ibhokisi eliqinile / ibhuku elinamandla Izinga lokushisa elifanele liyi-20 ℃ ~ 25 ℃. Izinga lokushisa le-glue (lokushisa okungewona umshini) lingu-60 ℃ .Lungiswa ngomshini.
2.Pre-ukuncibilika: Faka i-glue emanzini anezinga lokushisa elingama-75 ℃ ngaphambi kokuncibilika, futhi uhlanganise no-10% wamanzi ashisayo ukuze abe okuqukethwe okuqinile okungama-55%. Ngokuvamile akunconywa ukusebenzisa amanzi amaningi kakhulu ukungcolisa i-glue, futhi ulawule izinga lokushisa elingeqile kuma-70 ℃ ukugwema izinkinga ezingalindelekile.
3.Uma umshini ume isikhashana, izinga lokushisa kufanele lehliswe ukuze kugweme ukuhwamuka ngokweqile noma ukonakala.
4. Gcina endaweni epholile eyomile, kude namanzi, umswakama, ukushisa okuphezulu. Izinga lokushisa alikho ngaphezu kuka-20 ℃. Impilo yeshalofu ingunyaka ongu-1.
Langaphambilini I-Gelatin yobuchwepheshe
Olandelayo: Ijubane Elimaphakathi I-Jelly Glue